ရတနာသုံးပါး အစစ်အမှန်ကို သိစေခဲ့သော ဘဝလမ်းညွှန် ကျေးဇူးရှင် အဖဆရာတော်အတွက် ပူဇော်စာတမ်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ရတနာသုံးပါး အစစ်အမှန်ကို သိစေခဲ့သော ဘဝလမ်းညွှန် ကျေးဇူးရှင် အဖဆရာတော်အတွက် ပူဇော်စာတမ်း
ရတနာသုံးပါး အစစ်အမှန်ကို သိစေခဲ့သော ဘဝလမ်းညွှန် ကျေးဇူးရှင် အဖဆရာတော်အတွက် ပူဇော်စာတမ်း
Posted by nyanakyaw on Feb 16, 2012 in Copy/Paste | 14 comments
တို့ဆရာကား တပည့်များကို မကောင်းမြစ်တာ ကောင်းရာညွှန်လတ် လုပ်ခဲ့တယ်။
တို့ဆရာကား တပည့်များကို ပဲ့ပြင်ဆုံးမ ကိလေသာမှ ဘေးရန်ဆီးကာ လုပ်ခဲ့တယ်။
တို့ဆရာကား တပည့်များကို သနားသည်းခံ ဝေဖန်ထောက်ရှု ပြုခဲ့တယ်။
ဒီဟာကို “စစ်”၊ ဒီဟာကို “ပစ်”၊ ဒီဟာ “တရား”၊ ဒီဟာ “အမှား” ပြတ်ပြတ်သားသား သိစေခဲ့တယ်။
“ဘယ်လိုပါလိမ့်” “ဟိုလိုလား” “သည်လိုလား” ဝေဝါးမရှိ။
ကိုယ်လုပ်တာ ကိုယ်သိ၊ ကိုယ် မလုပ်တာ ကိုယ်သိ။
“ပစ်စရာ” နဲ့ “အနှစ်ရတနာ” ပိုင်းခြားသိမြင်၊
လူ “စင်စင်”လေး၊ မေ မွေးရကျိုး နပ်ခဲ့ပြီ…..
အမှန်အတိုင်း နိုးကြား၊ အမှန်အတိုင်း စိတ်ထား။
အမှောင်ကို ထွင်းဖောက်၊ အလင်းရောက်ခဲ့ပြီ….
အလင်းထဲက လူဟာ ကိုယ့်လမ်းကိုယ်လျှောက် လမ်းမပျောက်ဘူး။
တို့တစ်တွေဟာ “ကျွမ်းကျင်တဲ့ သမားတော်ရဲ့”လက်ထဲမှာ
“သံသရာ” လူသတ်သမားလက်က လွတ်ခဲ့ပြီ….
“ရိုးသားတဲ့ ဆရာ”ရဲ့ သင်ပြမှုကြောင့်
“မျက်လှည့်ဆရာ ကိလေသာ”ရဲ့ လှည့်ကွက်ကိုလည်း မှန်းတတ်ခဲ့ပြီ…..
ဘယ်ဟာက “ကံ”၊ ဘယ်ဟာ “ကြိယာ”
တို့ ဘုရားဟာ တို့ရဲ့ “နန်း”
တို့ တရားဟာ တို့ရဲ့ “လမ်း”
တို့ ဆရာဟာ တို့ရဲ့ “အား”
တုနှိုင်းမရ တို့ “အဘ”
တို့ရဲ့ “မိဘ” – “အမတ”
တို့ ရင်ထဲမှာ “ထာဝရ”
ဘယ်တော့ (ဘယ်တော့)မှ မသေစေရ။
(10-2-2012) (၂၉)ကြိမ်မြောက် ဓမ္မဝိဟာရီပူဇော်ပွဲ တွင် ဖတ်ကြားခဲ့ပါသည်။
ပူဇော်ထိုက်သူကို ပူဇော်တာ “မင်္ဂလာ”တဲ့။
မင်္ဂလာက နေ အမင်္ဂလာ ဖြစ်သွားမှ ဒုက်ကို ခနေရလို ့ဒုက်ခ ဖြစ်သွားဦးမယ်———-
လွန်ခဲ့သည့်ကာလ (၂၅) နှစ်က ရှင်ဉာဏ(ခ) ရှင်မိုးပြာသည် စစ်ကိုင်းတိုင်း မင်းကွန်း ရွှေမြင်တင်တောင်မှာ နေထိုင်သူဖြစ်ပါသည်။
ဈာန်ရပုဂ္ဂိုလ်၊ ပဋိသမ္ဘီဒါရ ရဟန္တာ စသည်ဖြင့် ကြွားဝါကာ တရားဟောခဲ့သူဖြစ်ပါသည်။
ထိုအကြောင်းကို ကြားသိကြသဖြင့် နိုင်ငံတော် သံဃနာယကအဖွဲ့ကြီးကပင် စစ်ကိုင်းတိုင်း သာသနာရေးမူး ဥိးစိုးမြင့် က
စွဲဆို၍ စစ်ကိုင်းမြို့နယ် သံဃနာယက သို့ တင်ခဲ့သည်။
ရှင်ဉာဏ နှင့် ရှင်ဂုဏ တို့နှစ်ပါး ရှုံးခဲ့ကြပါသည်။ တစ်ဖန် သူတို့ကပင် တိုင်းသို့တက်ခဲ့ကြသည်။
တိုင်းမှာလဲ သူတို့ပင် ရှုံးကြပြန်သည်။ တစ်ဖန် ဗဟိုဌာန ဟု ဆိုရမည်ဖြစ်သော နိုင်ငံတော်သံဃမဟာနာယက ထံသို့ သူတို့ကပင် စောဒနာ
တင်ကြလျက် “သာသနာရေး လျှောက်ထားတောင်းဆိုလွာ” အမည်ဖြင့် စတင်၍ မြို့နယ်နှင့်တိုင်းတို့က ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ပြင်ဆင်ပေးရန်
တောင်းဆိုခဲ့ကြသည်။ နိုင်ငံတော်မှာလဲ သူတို့ပင် ရှုံခဲ့၍ ထောင် သုံးနှစ်ကြခဲ့ပါသည်။
နိုင်ငံတော် သံဃနာယကဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တမာနိတသီရိဘိဝံသထေရ် ၏ မိန့်ကြားချက်အရ သိရသည်မှာ
(၁၉၈၃-၁၉၈၆ ခုနှစ်က ဝိနည်းဓမ္မကံ (၉/၁၁)ဖြင့် တရားစွဲခံရပြီးကတည်းက ပြတ်ပြတ်သားသား အရေးယူဖို့
စီရင်ခဲ့ရာတွင် တိပိဋကဓရ မင်းကွန်းဆရာတော်ကြီးက မေတ္တာရပ်ခံမူကြောင့် ထောင်သုံးနှစ်မျှဖြင့်
ပြီးသွားရခြင်းပင်) ဟူ၍ ဖြစ်ပါသည်။
၁၉၉၁-၁၉၉၈ ခုနှစ်တွင် ထေရဝါဒအတွင်းမှ ဂိုဏ်းသီးသန့်ထောင်မူဖြင့် ထောင် (၁၀) နှစ်ကျခဲ့ပါသည်။
ထောင်နှစ်ကျခံပြီး ထွက်လာပြီးနောက်တွင် ပစ္စုပ္ပန်ကမ္မဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ အမည်ခံလျက်ဂိုဏ်းထူးထောင်ပြီး
မိလိန္ဒပဥှာဝတ္တု စသည်တို့ကိုပါ ပြန်လည်ကူးယူဖြန့်ဝေကြောင်းတွေ့ရပြီး (၂၀၀၂-၂၀၀၈)တို့မှာ
အကြီးအကျယ် အင်အားကြီးဂိုဏ်းဖြစ်လာကြောင်း တွေ့ရပါသည်။
၁၉၉၁ ခုနှစ်တွင် ထေရဝါဒသာသနာတော်ကြီး စော်ကားခံခဲ့ကြရပြီးဖြစ်ပါသည်။
တစ်ဖန် ၁၉၉၈ ခုနှစ်မှ စ၍ ယခုတိုင်အောင် ဆက်တိုက်ပင် ထေရဝါဒသာသနာတော်ကြီးကို ဖျက်စီးခံနေရပါပြီ။
ပစ္စုပ္ပန်ကမ္မဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ အမည်ခံဂိုဏ်းကြိးသည် ပညာရှင်အင်အား ဘာသာဝင်အင်အား ငွေကြေးအင်အား
ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေဖြန့်ချီအင်အား အခိုင်မာဆုံး အဓမ္မဝါဒီဂိုဏ်းကြီးဖြစ်ပါသည်။
ငွေရတု ပူဇာ စာအုပ်ကို လေ့လာကြည့်လျှင် အလွန်ပင် ထင်ရှားမည်ဖြစ်ပါသည်။
ပညာတတ် အမည်ခံ အရှင်ဉာဏိန္ဒာလင်္ကာရ အရှင်ဝိစိတ္တသာရာဘိဝံသ (မြစ်ကြီးနား) စသူများ၊
ဥိးစိုးအောင် (သ.စ.အ- ဓမ္မာစရိယ၊သုတေသန) စသည်များ အပြင် စာရေးတတ်သူ ဟောပြောတတ်သူ
အခြေခံသင်တန်းများရော ဓမ္မဝိဟာရီ သင်တန်းများပါရှိကြကြောင်း သိရပါသည်။
ဓမ္မဝိဟာရီ သင်တန်းတို့တွင် အာသဝက္ခယဝိဟာရီစာတမ်းပြုစုရကြောင်းလဲ သိရပါသည်။
ဓမ္မဆရာ ဥိးရန်အောင်၏ ဟောပြောချက်များအရ ဩဠာရိကသုခုမ ဆေးပညာရှင်များအုပ်စုလိုက်ကြီးပင်
အင်းဝဘဏ်သူဌေး ဦးရင်စိန် တို့လို သူဌေးများကြောင့်လည်းကောင်း၊
ဦးဝင်းမြင့်မောင် လို ပုံနှိပ်တိုက်ကျွမ်းကျင်သူများကြောင့်လည်းကောင်း၊
အရှင်ဝိစိတ္တသာရာဘိဝံသ (မြစ်ကြီးနား) လို သိန်းပေါင်း ထောင်သောင်းချီချမ်းသာသူများကြောင့်လည်းကောင်း၊
စာအုပ်များ အများအပြား ထုတ်ဝေနိုင်ကြောင်းလည်း သိရပါသည်။
အရှင်ဝိစိတ္တသာရာဘိဝံသ (မြစ်ကြီးနား) သည် စာအုပ်များစွာကို ကိုယ်တိုင်ရေးပြီး
ကိုယ်တိုင်ထုတ်ဝေလျက် ကိုယ်တိုင်ပင် နေရာများစွာသို့ လိုက်လံသွားလာကာ ပေးဝေစည်းရုံးနေကြောင်း
ထိုင်နိုင်ငံတွင် ပညာသင်ကျောင်းသား အဖြစ်ဖြင့်နေထိုင်လျက် ဝါဒဖြန့်နေသူ အရှင်ကုမာရာလင်္ကာရ လို(kumara@rollerboys.com) နိုင်ငံတကာ
ဓမ္မဝီဟာရီ ရှင်ဉာဏ ကိုယ်တိုင်ပင် ဝိဟာရီ အမည်ခံလျက် အင်တာနက် အသုံးပြု
ထိုင်းနိုင်ငံတွင်လည်း တစ်ဘဝသာရှိသည့် ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဝါဒီ ရှင်ဗုဒ္ဓဒတ္ထ လို ထိုင်းဘုန်းကြီးများ
အင်တာနက်အားဖြစ်လည်း ကမ္ဘာသို့တိုင်အောင် ပေါက်ရောက်ကျယ်ပြန့်လျက်ရှိနေကြောင်း
စင်္ကာပူဗုဒ္ဓဘာသာလူငယ်များ အကြားတွင် အလွန်ရေပန်းစားသော ဂိုဏ်းဖြစ်၍ စင်္ကာပူနေ မြန်မာူဗုဒ္ဓဘာသာလူက
မှာယူသဖြင့် ပေးပို့ရောင်းချရသည့် စာအုပ်များ များပြားကြောင်းလည်း သိရပါသည်။
အရိယဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေကဲ့သို့သော ရန်ပုံငွေများလည်း အလှူခံလေ့ရှိခြင်းကြောင့် အလွန်တိုးတက် ကြီးထွားနေကြောင်း
သိရပါသည်။ ထို့ပြင် လစဉ်ထုတ် ပေးစာများကို ရောင်းချသည့် သွင်းငွေများနှင့် အခွန်လွတ်ထုတ်ဝေထားသည့်
စာအုပ်ကြီးတို့ကို တအုပ်လျင် (၃၀၀၀) ကျပ်နုံးဖြင့် ရောင်းချသည့်အတွက် အသင်းဝင်များထံမှ
ရောင်းရငွေများကြောင့် အလွန်ပင် တိုးတက်စည်ကားနေကြောင်း——————–
ဒါကတော့ ပရမတ်ဝါဒီတွေကတော့ သူတို့ဝါဒ ယိုင်လဲမှာဆိုတော့ သူပုန်လို့ သတ်မှတ်မှာပေါ့။
ဗုဒ္ဓရဲ့အရိယသစ္စာကို ပြန်ထွန်းကားလိုသူတွေကတော့ သူရဲကောင်း၊ အာဇာနည်လို့ သတ်မှတ်မှာပဲ။
(မင်းကွန်းကြီး ဝေ့လည်ကြောင်ပတ်နဲ့ မလည်မရှုပ်တွေ လုပ်ခဲ့လို့ ဇယားတွေရှုပ်နေရတာပါ လို့ပြောရင်ကော မရဘူးလား။
ပရမတ္တသစ္စာဆိုတာ အရိယသစ္စာ မဟုတ်မှန်း သူသိရဲ့သားနဲ့ ဦးဉာဏကို ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအမုန်းနဲ့ မလည်မရှုပ်နဲ့ သူကယ်သလိုလို ဘာလိုုုလိုနဲ့ ချောက်တွန်းခဲ့တာ မင်းကွန်းအသိပါ။ အေးလေး ဆက်ပြောရင် အောင်မင်းလွန်ရာကျတော့မယ်။ ကလာကာနောက်ကွယ်က ကိစ္စတွေ မဖော်တော့ပါဘူး။ ရှိနေပါစေတော့၊ ဟူး။ ပြောရတာလည်း မောပါ့။)
သူကြီးခင်ဗျား we ren thu ၏ ကွန်းမန့်ကို ဖျက်ပေးပါရန်တောင်းဆိုပါသည်။ ကျနော်ရေးတင်သော ကဗျာမှာ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ဝရက်နေ့က ကျွန်တော်မိတ်ဆွေဖတ်ကြားသော ကဗျာကို နှစ်သက်၍ တင်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ we ren thu ရေးသောစာများမှာ သူ၏အမုန်းများကို ထုတ်နုတ်တင်ပြထားသလို ဖြစ်ပြီး ကျနော်ရေးသော ကဗျာနှင့် လုံးဝသက်ဆိုင်ခြင်းမရှိပါ။ တင်လိုပါက ကွန်းမန့်အဖြစ်မဟုတ်ပဲ သီးခြား ပို့စ်တစ်ခုအဖြစ်သာ တင်စေလိုပါသည်။
nya na kyaw ရဲ့
we ren thu ရေးထားတာ ပုဂ္ဂလိက ဆဲစာမှ မဟုတ်တာ ။
နဲနဲ လွန်တဲ့ အရေးအသား ဆိုလို့
” ၁၉၉၁ ခုနှစ်တွင် ထေရဝါဒသာသနာတော်ကြီး စော်ကားခံခဲ့ကြရပြီးဖြစ်ပါသည်။
တစ်ဖန် ၁၉၉၈ ခုနှစ်မှ စ၍ ယခုတိုင်အောင်
ဆက်တိုက်ပင် ထေရဝါဒသာသနာတော်ကြီးကို ဖျက်စီးခံနေရပါပြီ။ ”
ဒါလောက်ပဲ တွေ့တာပဲ ၊ ဒါလည်း သိပ် မလွန်လှပါဘူး ။
ကျန်တာတွေက အချက် အလက်တွေ ဥစ္စာ ။
မမှန်ဘူး ထင်ရင် ၊ မမှန်တာပါရင် ၊ ခင်ဗျား ပြန်ဖြေရှင်းပေါ့ ။
ဘယ့်နှယ် Comment ကို ဖျက်ခိုင်းရတာတုန်း ။
သူများ အဝေဖန် မခံချင်ဘူး ဆိုရင်လည်း ၊ Post တင်မနေပါနှင့်ဗျာ ။
အင်မတန်သိမ်မွေ့တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ.. မြန်မာပြည်ရောက်တော့.. ဂိုဏ်းတူ/ဂိုဏ်းကွဲအချင်းချင်း.. အားပြိုင်..ဆရာကိုးကွယ်မှုတွေနဲ့.. အပြန်အလှန်… အမုန်းနဲ့အစွန်းရောက်နှိပ်ကွပ်မှုကို.. တွေ့ရတယ်..။
အားသာသူတွေဟာ.. အစိုးရနဲ့ပေါင်းပြီး..တဖက်ကို.. ထောင်ချတာမျိုးအထိလုပ်ထားတယ်..။
ဒါလိုလုပ်တာကိုလည်း.. ထောက်ခံတဲ့.. ဘာသာရေးအစွန်းရောက်တာတွေ..ထပ်ထပ်တွေ့ရပြီး.. အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသက.. ဘာသာရေးအစွန်းရောက်တွေနဲ့ မခြားတဲ့.. အရေးအသား.. အပြုအမှုတွေတွေ့ရပါတယ်..။
ဒီလုပ်ရပ်တွေဟာ.. မြန်မာပြည်ကို.. ကမ္ဘာ့အလယ်မှာ.. ဘာသာရေးမှာအဖိနှိပ်ဆုံး ၄နိုင်ငံထဲထိ ဆွဲချဖြစ်စေနေတာကိုလည်း.. သတိထားမိကြဟန်မတူပါ…။
တကယ်တော့..we ren thu က ရေးခဲ့တဲ့..စာတွေဟာ.. အချက်အလက်ဆိုပေမဲ့.. တော်တော်များများက..စွတ်စွဲရေးထားတာတွေပါ..။ ကျုပ်လည်း တိုက်ဆိုင်စစ်ကြည့်ဖူးလို့ပါ..။
အဲဒီမူရင်းစာထဲ.. မန္တလေးဂေဇက်တောင်.. စွတ်စွဲခံရတဲ့အထဲ.. ပါနေဖူးပြီး.. မန္တလေးဂေဇက်မဂ္ဂဇင်းလုပ်ထားဖူးလေရဲ့..။
.. ဒါကိုလည်း..လွန်ခဲ့တဲ့တနှစ်လောက်ကတည်းက.. ဆူးမမက.. တင်ပေးဖူးပါတယ်..။
မြန်မာ့သာသနာ့သမိုင်းမှာ.. .. အစွန်းထင်းနှင့်တကွ…ဒီအဖြစ်အပျက်တို့… ကျန်ရစ်ပါစေသတည်း…။
ဂေါတမဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်အား တိုင်တည် ကျိန်ဆိုပါသတည်း…။
Foreign Resident ရေ ကျနော်ကတော့ ကျနော့်ဆန္ဒအတိုင်း ရေးလိုက်တာပါ။ တကယ်တော့..we ren thu က ရေးခဲ့တဲ့..စာတွေဟာ.. အချက်အလက်ဆိုပေမဲ့.. တော်တော်များများက..စွတ်စွဲရေးထားတာတွေပါ..။ ကျနော်တင်တဲ့ ကဗျာမှာ မိုးပြာလည်းမပါဘူ။ ဦးဉာဏလည်း မပါဘူး။ ဒါကြောင့်ပါ။
ဝေဖန်တာမခံချင်လို့မဟုတ်ပါဘူး၊ ဝေဖန်တာနဲ့ စွပ်စွဲတာကိုတော့ ခွဲခြားပြီး ရေးသားစေလိုတာပါ။ ဒါပေမယ့် စွပ်စွဲတာကို ရေးထားလည်း မူရင်းပို့ရှင်ကျနော်ကတော့ ဖတ်ပါတယ်။
we ren thu ရေးတဲ ့comment ထဲမှာ—မိုးပြာဂိုဏ်းကို ထိခိုက်စော်ကားတဲ ့အရေးအသားမျိုး တစ်ကြောင်းတစ်လေပါရင်ပြောစမ်းပါဗျာ———– ဒါမှမဟုတ် မမှန်တာကို လန်ကြုတ် နေတယ် —–ဒါတွေ တစ်ခုမှ မဖြစ်ခဲဘူး ဆိုရင်လည်း အထောက်အထားနဲ ့ပြောကြပါ ———မှန်တာကိုပြောလို့ထိခိုက်တယ်ဆိုလည်း တတ်နို်င်ဘူး ဘုရားတောင်မှ -ဟုတ်တယ် မှန်တယ် အကျိုးရှိတယ်—–ဆိုရင် ဘယ်သူကြိုက်ကြိုက ်မကြိုက်ကြိုုက် ပြောသေးတာပဲ ဆားအိုးတစ်လုံးကို ချထားပြီး လူတွေကို နှိုက်ခိုင်းရင် အနာမရှိလိုု ့ကတော ့ဘာမှ နာစရာရှိဘူးလေ ဟုတ်ဘူးလား ——–ခုက ကျတော်က လာဖတ်တဲ့အစ်ကို တွေ အစ်မတွေ ဦးလေးတွေ ဒေါ်လေးတွေ ဘိုးဘိုးဘွားဘွားတွေ —-က
ဓ မ္မဝိဟာရီဆိုတာကို မကြားဖူးမှာစိုးလို့စေတနာနဲ ့ဝင် လည်းကြော်ငြာ ဝင်ပေးတယ် စိတ်ကလည်း ဆိုးတတ်လိုက်တာ ———————-စွပ်စွဲတယ်ဆိုတာ မမှန်မကန် ပြောချင်ရာပြောတာ —–သတင်းပေးတယ်ဆိုတာ ဘာကဘယ်လို ရှိတယ်လို ့ပြောတာ ————သေချာလည်း ဖတ်ကြည့်ကြဦး ———————-
““ဒီလုပ်ရပ်တွေဟာ.. မြန်မာပြည်ကို.. ကမ္ဘာ့အလယ်မှာ.. ဘာသာရေးမှာအဖိနှိပ်ဆုံး ၄နိုင်ငံထဲထိ ဆွဲချဖြစ်စေနေတာကိုလည်း..
သူကြီးရဲ ့ထိမိတဲ ့ထောက်ပြဝေဖန်ချက်လေးအတွက် လေးစားရပါတယ်ဗျာ။ကိုယ်တိုင်ဖျက်နေတဲ့ သာသနပိုင်တွေအကြောင်း
ကိုနားမလည်နိုင်တော့ဘူး။နိုင်ငံတကာ မှာအရှက်ရစရာ ဖြစ်သွားခဲ့လေပြီ။
ယနေ့ (world) ကမာ့လူသားတွေ အများစုကတော့ မတူခြားနားတဲ့ ယုံကြည်မှုတွေ တခုနဲ့တခု သဘောထားကြီးစွာ ယှဉ်တွဲနေထိုင်ကြဖို့ လိုလားနေကြပါတယ်…
လူတွေအားလုံး တူညီဖို့ဆိုတာလည်း မဖြစ်နိုင်ပါဘူး…ဘုရားလက်ထက်တုံးကလည်း… လက်သည်းပေါ်က ပါလာတဲ့ မြေမှုန့် ပမာ နှင့် ဒီမဟာပထဝီမြေကြီးနဲ့တောင် နှိုင်းယှဉ်ပြခဲ့ ပြီးပြီဘဲ…
မြတ်စွာဘုရားကတော့ မိမိနှင့် အယူအဆမတူခြင်းကို နားလည်ခွင့်လွတ်ဖို့ သင်ကြားခဲ့ပါတယ်…
မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဆန့်ကျင်ဖက် ဂိုဏ်းဆရာတွေကို အကျိုးအကြောင်းပြ ဟောပြောခြင်းဖြင့်သာ
ဂျိန်းဘုန်းကြီးကို ကိုယ်းကွယ်တဲ့ ဥပါဋိဆိုရင်… သူ့ကိုးကွယ်တဲ့ ဂျိန်းဆရာက ဘာပြောတယ်ထင်လဲ
ဥပါဋိလည်းရောက်တော့..မယာများတာ မဟုတ်ဘဲ.. ဂေါတမပြောပာာတာ အားလုံးအမှန်တွေဘဲဆိုပြီး သူတို့ အလိမ်ခံရမှန်းသိပြီး ဂေါတမကို ဆည်းကပ်ကြတာဘဲ… ဒါကို ဘုရားက… ဥပါဋိကို မင်းတို့လို အကျော်အမော်တစ်ဦး ဟာ အပြောင်းအလဲ မမြန်သင့်ဘူး… မင်းတို့ကိုးကွယ်တဲ့ ဆရာဟောင်း ဖြစ်တဲ့
ဂျိန်းဆရာကြီးတွေကိုလည်း လှူဒါန်းဖို့ ညွှန်ပြခဲ့တယ်…
နားလည်ခွင့်လွတ်ခြင်း..စာနာထောက်ထားခြင်း..စိတ်ရှည်သီးခံခြင်း တို့ဟာ ဗုဒဘုရားရဲ့ အမှတ်လကဏာတွေဘဲ… ဒို့ကြောင့်မို့ …ဗုဒဘုရားသမိုင်း မရိုင်းစေနဲ့….လို့ဘဲ အကြံပြုပါရစေ…
ပိုမို နားလည်စေရန် (၂)
We Ren Thu ရေးတဲ့စာတွေက ပြန်လည်ရှင်းလင်းပြနေစရာ သိပ်မလိုတဲ့ဟာတွေပါ…..
“သိရပါသည်၊ ကြားရပါသည်” က များနေတာပဲ သူ့ဟာသူ သိနေရ၊ ကြားနေရတာတွေအပေါ်မှာ ဘာတွေများ လိုက်ရှင်းနေရဦးမှာလဲဗျာ…..
ပြောစရာတစ်ခုရှိတာက ရှင်ဉာဏ ထောင်သုံးနှစ်ကျတယ်ဆိုပေမယ့် တကယ့်တမ်းကျတော့ ရှင်ဉာဏ ကသာ အမှုနိုင်သူဖြစ်ပါတယ်။ တရားရုံးကကို တရားနိုင်ပေးပြီး ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်တာပါ….
နောက်ဆယ်နှစ်ကျတာမှာလည်း မဆလ ခေတ်က ကံဆောင်နေတဲ့ သံဃာတွေနဲ့ ရောယောင်ပြီးတော့သာ ဆွဲထည့်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း………